दमका बिरामीले प्रयोग गर्ने ‘इन्हेलर’ के हो ? कसरी काम गर्छ ?
बैशाख १८, २०७५ मगलवार ०८:५१:३४
दमबारे सचेतना फैलाउनका लागि ‘ग्लोबल इनिसिएटिभ फर आस्थमा’ नामक संस्थाले प्रत्येक वर्षको मे महिनाको पहिलो मंगलबारलाई विश्व दम दिवसका रुपमा मनाउने गरेको छ। दम श्वासप्रश्वास सम्बन्धी दीर्घ रोग हो। जसले बालबालिकादेखि वृद्ध–बृद्धासम्मलाई समान रुपमा असर ...
बैशाख १७, २०७५ सोमवार ०९:५९:१८
काठमाडौं यतिखेर बढ्दो सहरीकरण र सवारी चापको चपेटामा परेको छ। सवारीसाधनको धुवाँले प्रदूषण बढाइरहेका बेला खानेपानी आयोजनाका नाममा जताततै खनिएका सडकमा उडेको धुलोले वातावरण निस्सासिँदो छ। सन् २०१७ को प्रदूषण सर्वेक्षणअनुसार काठमाडौं संसारकै पाँचौ प्रदूषित...
जवान देखिन बोसो प्रत्यारोपण, कस्तो अवस्थामा गर्ने, कति सुरक्षित ?
बैशाख १४, २०७५ शुक्रवार १५:००:३४
सुन्दर बन्न मानिसहरु विभिन्न उपाय अपनाउछन्। कसैले सौन्दर्य प्रशाधनको प्रयोग गर्छन् भने कसैले कस्मेटिक सर्जरीको सहारा लिन्छन्। कसैले भने प्रत्यारोपण विधि अपनाउँछन्। शरीर सुन्दर बनाउन प्रयोग गरिने विधिमध्ये एक हो– बोसो प्रत्यारोपण अर्थात् फ्याटग्राफ्ट। चाउरीपना हटाउन, दाग...
बैशाख १४, २०७५ शुक्रवार ११:००:२७
धेरैजसो बिरामी पेटको दुखाइका कारण अस्पताल आउने गर्छन् । प्रायः ग्यास्ट्रिकको समस्या भयो भन्दै आउँछन् । तर, लामो समयसम्म दुखाइ कम नहुने, ग्यस्ट्रिकको औषधिले दुखाइ कम भएजस्तो हुने तर दुखाइ निको नहुने समस्या लिएर बिरामी अस्पतालको ढोका सम्म आइपुग्छन् । पेटको दुखाइ भइरहनु भनेक...
औलोको जोखिम, लक्षण र रोकथामका उपाय
बैशाख १२, २०७५ बुधवार १४:२५:३०
औलो अर्थात् मलेरियो लामखुट्टको टोकाइका कारण लाग्ने रोग हो। मानिस तथा अन्य केही जनावरलाई समेत लाग्ने यो रोग प्लाज्मोडियम समूहका प्रोटोजोआ परजीवीका कारण लाग्ने गर्छ। लामखुट्टेले टोकेर परजीवी शरीरमा प्रवेश गर्यो भने त्यसको १० देखि १५ दिनमा लक्षणहरू देखिन सुरु हुन्छ। प्ल...
बैशाख १२, २०७५ बुधवार ०८:२२:३०
गत वर्ष, ठिक यसै समयतिर एक ३० वर्षीय युवा अस्पतालमा आफूलाई लागेको औलोको उपचार बारेमा जानकारी लिन आइपुगेको थिए। त्यो युवक केहि समय अगाडी अफ्रिकी महादेशको कंगो देशमा रोजगारको लागि गएका थिए। उसको भनाइअनुसार रोजगारीको सिलसिलामा त्यहाँ जाँदा उसलाई कडा खाल...
बैशाख ११, २०७५ मगलवार १४:३३:३२
मानिसको स्वास्थ्यमा जुनसुकै बेला आपतकालिन अवस्था (इमर्जेन्सी) आउन सक्छ । बाटोमा हिँड्दाहिड्दै लडेर अस्पताल पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । घरमा खाना पकाउँदा–पकाउँदैं आगोले जलेर अस्पताल लैजानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर आकस्मिक रुपमा अस्पताल ल...
बैशाख ११, २०७५ मगलवार १०:२४:५२
कहिलेकाहीँ प्रकाशमा हेर्दा इन्द्रेणीजस्तो देखिने, टाउको दुख्ने, वाकवाक लाग्ने, धमिलो देखिनेजस्ता समस्या देखिन सक्छन् । यस्ता लक्षण देखिए निको भइहाल्छ नि भनेर बेवास्ता गर्नुु हुँदैन । आँखामा लाग्ने रोग जलविन्दुका कारण यस्तो भएको हुन सक्छ । के हो जलबिन्दु ? मानिस...
बैशाख १०, २०७५ सोमवार ०६:५३:३८
यो संसार प्रकृतिको देन हो र प्राकृतिक नियमसंगत चल्छ । खाद्यवस्तु पनि प्रकृतिले मानव समुदायलाई दिएको उपहार हो । यसमा सबै जीवजन्तुको अधिकार हुन्छ । तर हरेक वस्तुमा पेटेन्ट अधिकार लिन खोज्ने व्यापारिक कम्पनीले बिरुवामा पनि पेटेन्ट अधिकार पाउने प्रयासस्वरूप हाइब्रिड÷...
किन हुन्छ आँखाको डेढोपन ? उपचार कसरी गर्ने ?
बैशाख ६, २०७५ बिहिवार ०६:५०:४२
कुनै वस्तुलाई हेर्दा एउटा आँखाले त्यही वस्तुलाई र अर्को आँखाले तल–माथि, दायाँ–बायाँ हेर्नुलाई आँखा डेढो भएको मानिन्छ। बच्चा जन्मिसकेपछि आँखाको सम्पूर्ण हेर्ने भागको विकास हुन्छ। त्यसक्रममा आँखा घुमाउने मांसपेशी पनि विकास हुन्छ। त्यही मांसपेशीले आँखालाई सन्तु...
बैशाख २, २०७५ आइतवार ०८:२१:४०
डा अमरेन्द्र झा, अर्थोपेडिक फिजियोथेरापिस्ट फिजियोथेरापी आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको एउटा शाखा हो। यसमा शारीरिक अभ्यासबाट रोगको उपचार र रोकथामका साथै बिरामीलाई परामर्श दिइन्छ । विभिन्न कारणले समस्या भएका शरीरका अंगलाई पूर्ववत अवस्थामा ल्याउन गरिने उपचार वि...
क्रिटिकल केयरमा सहयोगी नयाँ उपकरण
चैत ३०, २०७४ शुक्रवार ०७:३०:०५
डा अमिर सिद्दिकी सिकिस्त अवस्थाका बिरामीलाई विशेष उपचार तथा हेरचाह प्रदान गर्ने चिकित्सालाई ‘किटिकल केयर’ भनिन्छ । शरीरका महत्वपूर्ण अगंहरु (जस्तै– मुटु, मिर्गौला, मस्तिष्क, कलेजो आदि) मा गम्भीर समस्या देखियो भने क्रिटिकल केयरको आवश्यकता पर्छ । ...
चैत २७, २०७४ मगलवार १६:४३:००
नेपालमा बर्सेनि १ लाख जनामा २ सय ५८ महिलाको प्रसूतिसम्बन्धी समस्याले मृत्यु हुने गर्छ । यसमा मुटुको रोग सबैभन्दा गम्भीर कारण बनेको पाइएको छ । आमा तथा गर्भको शिशुको विकासको वातावरणलाई अनुकूल बनाउन गर्भवती महिलाको शरीरमा केही परिवर्तन आउँछन् । यसलाई मेडिकल भ...
गर्मीमा आँखामा देखिने समस्या र बच्ने उपाय
चैत २६, २०७४ सोमवार १४:३९:००
मौसम परिवर्तन हुने समयमा विभिन्न खाले स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् । गर्मी मौसम सुरु भइरहेको छ । यो याममा हावा चल्ने, धूलोधुँवाले आँखामा विभिन्न खाले समस्या ल्याउने हुन्छ । यसैले गर्मीमा आँखालाई यसबाट जोगाउन आवश्यक छ। यो समयमा आँखा सुख्खा हुने, एलर्जी तथा आँखा पा...
एक्युट इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम देखियो? स्क्रब टाइफस हुन सक्छ
चैत २६, २०७४ सोमवार ११:४९:००
एक्युट इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम (एइएस) देखिने बित्तिकै धेरै स्वास्थ्यकर्मी जापानिज इन्सेफ्लाइटिस शंका गरी त्यसै अनुरुप जाँच पड्तालतिर लाग्ने गर्छन्। यो गलत पनि छैन। तर, केही वर्षयता नेपाल सरकारले जापानिज इन्सेफ्लाइटिस विरुद्धको खोप खासगरी उच्च जोखिमका स्थानहरुमा दिन थालिसकेको...
चैत २५, २०७४ आइतवार १२:४९:००
साधारणतया स्वस्थ हुनु भनेको शरीरले आफ्नो क्रियाहरू बिना कुनै गतिरोध, बिना कुनै अप्ठ्यारो, हामीलाई असजिलो महसुस नगराईकन गर्नुका साथै मन सकारात्मक र प्रशन्न हुनु हो। जब शरीरले हामीलाई कुनै असजिलो महसुस नगराईकन आफ्ना जैविक क्रियाहरू गर्छन्, साथै जबे मन–मस्तिष्क प्रश...
यस्ता छन् स्पाका फाइदा
चैत २४, २०७४ शनिवार २१:०४:५४
पानीबाट गरिने उपचार पद्धतिलाई बोलीचालीको भाषामा ‘स्पा’ पनि भनिन्छ । यो सालस पर एक्युम ( salus per acum ) को छोटकरी रुप पनि हो । स्पा उपचार पद्धति नौलो लागेपनि यो परापूर्वकालदेखि नै चल्दै आएको विधि हो । समाज विकासका क्रममा स्वास्थ्यकर्मी थिएनन्, चिकित्सक थ...
चैत १९, २०७४ सोमवार ११:४९:००
मुखमा विभिन्न कारणले घाउ आउन सक्छ। कसैलाई तातो चिजले पोलेर घाउ हुनसक्छ भने कसैलाई खानाको एलर्जी या कसैलाई वंशाणुगत कारणले घाउ हुन सक्छ। सबै घाउ हानिकारक नभए पनि कुनै भने शरीरका अन्य रोगका कारण हुन सक्छन्। कतिपयमा अल्सर या क्यान्सरको कारण पनि हुन...
चैत १७, २०७४ शनिवार १२:०९:००
श्याम आजकाल बिहान ३ नबज्दै उठ्छ । सामान्यतः ऊ यति छिटो चाँडै ब्युझिने मान्छे होइन । यति चाँडोे उठ्दा पनि उसलाई थकाई भने लाग्दैन । बरु अझै खुशी देखिन्थ्यो। अाजकाल ऊ धेरै गीत गाउने र नाच्ने भएको थियो । अनि ‘त्यसो नगर’ भनेर सम्झाउँदा झनै रिस...
'मूड'को मानसिक समस्या अर्थात् बाइपोलर डिसर्डर, सम्भव छ मनोसामाजिक उपचार?
चैत १६, २०७४ शुक्रवार १८:५४:००
समय, परिस्थिति र घटनाक्रम अनुसार खुसी-दु:खी हुनु जीवनचक्र हो। तर कहिलेकाहीँ लगातार खुसी हुनु, रिसाउनु वा दु:खी हुनु कुनै परिस्थिति मात्र नभई रोग पनि हुन सक्छ। यस्तै एउटा हो, मनोरोग- बाइपोलर डिसर्डर। विश्वको तथ्यांक हेर्ने हो भने १.२ प्रतिशत मानिसमा बाइपोल...